Zimbaboe " Journey-Assist - Fampahalalana mahasoa. Climate. Hanao inona
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Africa » Zimbaboe
Zimbabwe. Fampahalalana ankapobeny
Zimbabwe ho an'ny fizahan-tany. Inona no tokony hatao any Zimbabwe
Victoria Falls any Zimbabwe
Zimbaboe dia firenena taloha ao amin'ny kaontinanta afrikanina, natsangana tamin'ny faritry ny fanjakan'ny Monomotapa teo aloha. Ny mpizahatany ao Zimbaboe dia manintona flora hafakely sy tsangambato mahafinaritra ara-tantara sy kolontsaina mahatalanjona. Betsaka ny valan-javaboary, renirano tsara tarehy misy riandrano mahavariana, karazana biby any ivelany. Ireo tia rafting, safari ary toetra virjiny mbola tsy simba dia tonga eto amin'ity firenena ity.
Ny natiora no tena loharanom-pizahantany any Zimbabwe. Ny governemanta eo an-toerana, izay mitazona ny politika tontolo iainana sahaza azy, dia nanome antoka fa biby maro no voatahiry amin'ny tontolo voajanahariny. Marihina fa miaraka amin'izany rehetra izany, Zimbaboe dia mijanona ho iray amin'ireo firenena afrikana vitsy izay tsy voarara ny mihaza.
Manana fatiantoka golf koa i Zimbabwe. Eto amin'ity firenena ity no misy ny saha tsara indrindra any Afrika ho an'ny lalao ity.
Ny trano fandraisam-bahiny lehibe indrindra dia ny renivohitry ny firenena, Harare, Victoria Falls ary ny tanànan'i Bulawayo. Zimbaboe koa mety ho an'ny fianakaviana manan-janaka - amin'ity tranga ity, afaka mitsidika ireo valan-javaboary ianao hijerena bibidia sy vorona. Ny traikefa tsy hay hadinoina dia homena amin'ny safari, mitsingevana eny amin'ny Zambezi, mandeha miaraka amin'ny liona ao amin'ny valan-javaboahary akaikin'i Victoria.
Mahaliana ny zava-misy eo an-toerana sy ara-maritrano. Ao amin'ny faritany misy ny renivohitra taloha misy ny fanjakana Monomotapa, nahita arkeology manodidina ny 400 ny trano arkeolojika. Hatramin'izao dia 3 ny trano maritrano izay voatahiry tsara. Ny sisan-javatra rava ao amin'ny tanàna taloha an'i Khami akaikin'ny tanàna maoderina ao Bulawayo dia nanomboka tamin'ny taonjato faha-15.
Toetany ao Zimbabwe
Any amin'ny tapany avaratry Zimbabwe, manjaka ny karazan-toetrandro ambanin'ny tany, any amin'ny faritra atsimo, ny karazana tropikaly. Ny vanim-potoana mafana indrindra eto amin'ity firenena ity dia maharitra hatramin'ny Desambra ka hatramin'ny martsa ary miavaka amin'ny maripana +25. Ny fotoana mangatsiaka indrindra dia ny volana Jona ka hatramin'ny Aogositra, ny isotherm amin'ity vanim-potoana ity dia +17. Avy amin'ny Novambra ka hatramin'ny Martsa ny orana.
Ny fotoana tsara indrindra hitsidihana an'i Zimbaboe dia miankina amin'ny tanjon'ny fitsidihana. Ny fotoana mety indrindra amin'ny rafting amin'ny zezika ao Zambezi dia ny volana aogositra ka hatramin'ny desambra, satria mandritra io vanim-potoana io dia tsy feno be ny ony, noho izany, tsy dia ory loatra. Ny vanim-potoana tsara indrindra hijerena ny biby eo an-toerana dia ny Mey ka hatramin'ny Oktobra. Na izany aza, tsy maintsy tsiahivina fa mandritra io vanim-potoana io dia mangatsiatsiaka amin'ny alina, indraindray ny mari-pana aza milatsaka ambany 0.
Loza any Zimbabwe
Somary ambany ny heloka bevava any Zimbabwe raha oharina amin'ireo firenena hafa any Afrika mainty. Na izany aza, ny fiainam-piainan'ny ankamaroan'ny mponina dia tsy mahafa-po, noho izany antony izany eny an-dalamben'ny tanàna dia mahita hatrany ny mpangataka be dia be ianao, indrindra fa ny ankizy. Noho izany dia ketraka mafy ny mitondra vola be aminao. Tena ilaina tokoa ny hananana volavolan-dalàna dolara ho an'ny fiantrana kely.
Rehefa mitsidika ny valan-javaboary nasionaly ianao, dia tokony hitondra zava-mahadomelina miaraka amin'ny tazomoka. Fehin-damba dia tokony hitafy pataloha mampifangaro kokoa, kiraro dia tokony ho aleoko pataloha, ary ny kiraro dia tokony hikatona. Hiaro anao amin'ny bibikely bibikely io.
Ny tranon'ny miaramila sy ny governemanta, ary koa ny polisy dia tsy tokony alaina sary eto amin'ity firenena ity.
Amin'ny vanim-potoana rehetra any Zimbabwe dia araraotina ny manao solomaso maizina sy ny satroka misy volo marevaka. Kiraro dia tokony ho maivana.
Tafiditra amin'ny Safari ny fanaovana akanjo sahaza. Tokony hanana loko voajanahary - volontany, khaki, fasika ary maitso.
ZWL. Dolara Zimbabweana. Fifanakalozana fifanakalozana. Banks.
Ny vola nasionaly any Zimbabwe dia dolara Zimbabweana na dolara Zimbabweana. Kaody iraisam-pirenena ZWL.
Naarina tany Zimbabwe tamin'ny dolara amerikana
Mandritra izany fotoana izany, saika na aiza na aiza, tsy misy olana, dia mandray an-tànana ny dolara amerikana. Ny fifanakalozana ny dolara amerikana sy ny dolara amerikana any Zimbabwe dia azo atao any amin'ny banky, hotely, seranam-piaramanidina Harare ary amin'ny teboka malalaka. Ao amin'ny basy sy ny faritany amin'ny faritany, matetika dia ekena ny famatsiana afrikanina tatsimo.
Ny tendrony mahazatra any amin'ny trano fisakafoanana sy hotely dia 5%, ary ho an'ny mpitari-dalana sy mpiambina amin'ny safary miaraka amina fihazana mahomby - avy amin'ny $ 10.
Misokatra ny banky manomboka ny 8 ka hatramin'ny 15 amin'ny herinandro (afa-tsy ny alarobia), manomboka amin'ny 8 ka hatramin'ny 13 amin'ny alarobia ary manomboka amin'ny 8 ka hatramin'ny 11:30 ny asabotsy.
Tsara homarihina fa ny dolara Zimbabweana dia miakatra amin'ny vidim-piainana avo, ary izay no antony mahatonga ny vidin'ny sandam-pirenena eto amin'ity firenena ity indraindray miova be ao anatin'ny fotoana fohy.
ATM any Zimbabwe
Tena ketraka mafy ny hiantehitra amin'ny ATM rehefa mandeha any Zimbabwe. Alohan'ny handaozana dia tsy maintsy manome vola vola ianao ary manakalo ny teti-bolanao manontolo amin'ny dia miaraka dolara amerikana. Mandritra izany fotoana izany, tokony hokarakarainao ny fisian'ireo fividianana dolara kely maro araka izay azo atao, satria amin'ny fividianana volavolan-dalàna be dia be dia tsy afaka na tsy te hifanakalo sy hanome fanovana avy amin'izy ireo. Amin'ny farany dia afaka manandrana ny hifandraisan'ny banky any Zimbabwe tahaka ny Barclays, Stanbic ary ny Standard Chartered. Ekena an-trosa vahiny no ekena indraindray.
Fandoavam-bola amin'ny carte de crédit any Zimbabwe
Ny fandoavam-bola amin'ny fividianana na serivisy amin'ny karatra any Zimbabwe dia tsy mety na aiza na aiza. Ankoatr'izay, na dia ny amboara efa misy amin'ny fandoavam-bola aza dia tsy mahomby matetika. Ny hotely lehibe indrindra sy ny trano fisakafoanana lehibe indrindra no manaiky karatra, nefa na izany aza, ny vaomiera ambony no arahana.
Ny fanamarinana mpandehandeha dia tokony hividy any Etazonia dolara ihany.
Ny dolara sy ny vola hafa any Zimbabwe
Serasera finday sy Internet any Zimbabwe
Betsaka ireo mpandraharaha finday any Zimbabwe, saingy mbola ambany be ny kalitaon'ny serasera finday eto amin'ity firenena ity. Tsy misy trano-telefaona an-tariby, na izany aza, misy tamba-jotra mandrindra ny fifampiraharahana. Betsaka ny klioba solosaina ao Harare izay manome serivisy Internet.
Fiantsenana any Zimbabwe. Inona no hividy?
Ny fanomezana tsara indrindra kalitao any Zimbabwe no tsara indrindra azo amidy mivantana mandritra ny safari. Ohatra, ireo mponina ao an-tanàna eo akaikin'ny Hwange National Park. Mandeha any Victoria Falls, afaka mividy souvenir ao amin'ny tanànan'i Mikuni, izay eo akaikin'ny Mosi oa Tunya Park.
Iray amin'ireo toerana fiantsenana tsara indrindra any Zimbaboe ny Mbaremusika Bazaar renivohitra. Misy rivo-piainana falifaly sy tabataba eto. Ny fividianana fahatsiarovana dia miaraka amin'ny fanarahana mozika: mpitendry mozika milalao tontolo andro eny an-tsena.
Ny mpitsangatsanganana miaraka amin'ny teti-bola lehibe dia afaka mitsidika fivarotana firavaka any Harare, izay ahafahanao mividy firavaka tsara tarehy. Manolotra vokatra miaraka amin'ny diamondra, safira ary emeraoda amin'ny vidiny ambanin'ny Eropeana izy. Izay no karazana firavaka eto amin'ity firenena ity tsy midadasika. Na izany aza, ny fitrandrahana ny vato soa sy ny metaly eto dia tanterahana voalohany ho an'ny fanondranana, fa ny tontolon'ny famokarana firavaka any Zimbabwe dia tsy ampy novokarina. Na izany aza, dia tokony hojerena tsara ny firavaka izay natolotra.
Namidy firavaka tena tsara koa i Zimbabwe amin'ny endrika vakana, firavaka hazo, volafotsy ary firavaka varahina, izay matetika misy vato semiprecious.
Ny mahavariana indrindra amin'ny sarontava amin'ny saron-kazo vita amin'ny loko isan-karazany dia mahaliana ihany koa. Matetika ampiana hoditra na volon'ondry izy ireo. Ireo sarontava izay natao manokana ho an'ireo fombafomba majika eo an-toerana dia lafo kokoa noho ny saron-tava hafa. Ho an'ny saron-tava fombafomba, matetika ny vidiny dia manomboka amin'ny $ 80, raha ho an'ny hafa rehetra - hatramin'ny $ 10. Marihina fa tena avo lenta ny kalitaon'ny fahatsiarovana hazo any Zimbaboe.
Ny sary sokitra vato namboarin'ireo tompon'ny vahoaka Shona ao an-toerana dia ankasitrahan'ireo tia ny zavakanto ankehitriny. Ny fitaovana ho an'ny famokarana azy dia vato vita amin'ny savony, jaspy, bibilava, malachite ary karazany hafa. Ho fanampin'ny sarivongana, vita amin'ny vato ihany koa ny harona mahafinaritra sy ny vazy.
Sakafo nasionaly Zimbabwe
Ny sakafo nasionalin'ny Zimbaboe dia manambatra ny sakafo malefaka "malefaka" anglisy ary "mafy" afrikana tompon-tany. Ny lovia mahazatra indrindra dia ny sadza, izay porridge vita amin'ny katsaka fotsy. Ny katsaka fotsy eo an-toerana dia foto-tsakazo malaza indrindra ampiasaina amin'ny lovia Zimbaboeana maro.
Toerana iray manan-danja no mibodo ny hena, izay any Zimbabwe dia antsoina hoe "nyama". Akoho, henan-kisoa, henan'osy, warthog, voay ary karazana antilopa toy ny impala sy kudu no be mpampiasa eto.
Amin'ireo sakafo zavamaniry, avokadia, ravina voatavo sy zava-maitso isan-karazany no malaza indrindra. Ny dibera voanjo dia mahazatra koa.
Ny vokatra malaza indrindra any Zimbabwe dia azo antsoina hoe antsy manidina mivonosana, izay atolotra any amin'ny bàlà (amidy mavesatra).
Ny zava-pisotro misy alikaola be mpitia indrindra eto amin'ity firenena ity dia ny labiera, indrindra ny karazany ao an-toerana antsoina hoe "vhavha" ary avy amin'ny katsaka manta no amokarana azy.
Ny trondro, ny capenta no malaza indrindra. Trondro kely hita ao anaty renirano io. Dia maina maina eo amin'ny masoandro, raha azo asiana sira. Ny capenta maina dia atody miaraka amin'ny voatabia sy tongolobe, ary ny malahelo kosa dia matetika manasa azy.
Lovia any Zimbabweana malaza hafa:
Botha dia porridge vita amin'ny katsaka miharo rano. Miakanjo voanjo na dibera. Matetika lanina amin'ny sakafo maraina.
Ny Borevors dia saosisy (henan-kisoa tsy dia matetika) matetika, miaraka amin'ny tsiro manaitra. Nadininy.
Mutakura dia lovia vita amin'ny voanjo sy legioma.
Dovi dia voatoto vita amin'ny legioma na hena ary legioma. Voaomana amin'ny dibera voanjo.
Biltong dia vokatra masiaka ampiasaina ho snack. Mba hanomanana azy, ny hena manta dia kosehina amin'ny zava-manitra ary ahantona mba ho maina ao amin'ny alokaloka.
Mapopo dia vatomamy vita amin'ny papaya.
Masoe dia zava-pisotro mifototra amin'ny ranom-boasary.
Mukaka wakakora dia zava-pisotro ronono masirasira (antsoina koa hoe lacto).